Lafo ny mampiditra mpianatra. Ao anaty vanim-potoan'ny fialan-tsasatra tanteraka ny mpianatra fa ireo ray aman-dreny kosa dia tsy misasa-mitady amin'ny fanomanana ny taom-pianarana vaovao 2013-2014.
Maro amin'ny sekoly tsy miankina no manararaotra ankehitriny satria manery ireo ray aman-dreny hividy ny kojakoja ao amin'ny ihany ary tsy mahazo mitady any ivelany. "Sahirana mafy izahay satria zaza roa fotsiny no efa mitentina eo amin'ny Ar 200 000 eo ny fitoavana fotsiny. Ary ny olana dia tsy maintsy fonosina tsy miloko ireo fitaovana satria hojeren'ny tompon'andraikitra sao tsy tao an-tsekoly no novidiana. Manampy trotraka ny fanerena any hividy solosaina. Rehefa misy carnaval izany moa dia ao ihany koa no mividy ny fitafiana ilaina. Tsy rariny intsony e. Na dia te hamindra ny zanakay any an-kafa aza izahay tsy afaka intsony satria manimba zaza koa ilay mifindrafindra toeram-pianarana", hoy ny renim-pianakaviana iray.
Tsy ny any amin'ny sekoly tsy miankina ihany no tratran'izany fa tonga hatrany any amin'ny sekolim-panjakana ny fahalafosana. Raha mampiditra mpianatra iray any amin'ny CEG ny ray aman-dreny dia mila manomana Ar 28 000 fara fahakeliny amin'ny sarany fotsiny. "Mbola tsy misy vidina kahie sy penina ary boky izany. Mafy ilay izy kanefa tsy maintsy ampianarina ny ankizy ho tafita. Indraindray aza alaim-panahy hidi-trosa kanefa mbola tantara ihany koa ny hanefana izany rehefa tonga ny faran'ny volana. Mihafy no azo atao", hoy Gisèle Ramanantenasoa, renim-pianakaviana.
Misy aza ireo sekoly sasany izay tsy manome ny biletà raha tsy maneho ny rosian'ny saram-pianarana jolay ny ray aman-dreny. Kanefa, tsy afaka nanao fanadinana ny mpianatra raha tsy efa nahefa izany. Sanatria ve mbola mila mandoa saram-pianarana ho an'ny volana aogositra indray?